धेरैलाई सताउने युरिक एसिड बढेर तनाबमा हुनुहुन्छ? यी घरेलु उपायहरु अपनाउनुहोस र छुटकारा पाउनुहोस् – mero sathi tv
On २२ चैत्र २०७४, बिहीबार १५:४३
युरिक एसिड रोगलाई एक दिर्घकालिन रोग मानिन्छ । त्यसैले यस्तो रोग लाग्नु भन्दा पहिले लनग्न नदिनु नै उचित हुन्छ । आधुनिक जिवनशैलि तथा खानपानमा आउने भिन्नताका कारण युरिक एसिडको समस्याले सताउन थाल्दछ । आउनुोस यस्ता उपायहरु अपनाएमा यस्तो रोगवाट बच्न सकिन्छ ।
सारै दुब्लाउनु भयो? यी १० घरेलु उपाय अपनाउनुस् सजिलै मोटाइन्छ !
को हुन् २०७४ की सर्वोत्कृष्ट नेपाली नायिकाहरु ? हेर्नुहोस् …
बाथका बिरामीले छुँदै नछुनुस् यी चिज
न खान पर्छ न पीउन नै, यी दुई पातले जरैदेखि हटाउँछ शुगर (मधुमेह)!, तर कसरी ?…